မြန်မာပြည် ငါတို့ပြည်: အမေစုအတွက်မေးခွန်းတချို့
အခုတော့ အမေစု လွှတ်တော်ထဲ ရောက်ပြီ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကောင်းရာ ကောင်းကျိုးတွေကို လုပ်မယ်လို့လည်း ကတိသစ္စာတွေ ဆိုပြီးပြီ။ ဒီတော့ အမေစု အနေနဲ့ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းရာ ကောင်းကျိုးတွေကိုပဲ ပြောစေလိုပါတယ်။ အမေစုနဲ့ NLD က လက်ရှိအစိုးရဟာ စစ်တပ်က ကြီးစိုး ထားတာပဲလို့ ပြောတာ ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ အခုအမေစုရဲ့ ဥရောပ ခရီးစဉ်မှာ ပြောနေတဲ့ ပုံစံကလည်း အဲသည်လို ပုံစံပါပဲ။ အမေစုရဲ့ ရန်သူတော်ဟောင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ အခု အုပ်ချုပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရပိုင်း လူကြီးဟောင်းတွေက အမေစုကို လွှတ်တော်ထဲ ၀င်ခွင့်ပြုတာ၊ နိုင်ငံခြားတွေ သွားခွင့်ပြုနေတာ အမေစု အပြောအဆို ဆင်ခြင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ILO ဆွေနွေးပွဲမှာ
“ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားလို့ သတ်မှတ်ပါသလား” လို့ အမေစုကို မေးခဲ့တယ်။ အမေစုရဲ့ အဖြေက “နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုရင် တိကျ ရှင်းလင်း ပြတ်သားတဲ့ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့် ဥပဒေကစပြီး လိုအပ်ပါမယ်၊ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ တရားမ၀င် နေထိုင်သူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်၊ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ လာဘ်စားမှုကင်းတဲ့ နယ်စပ်လူဝင်မှု ထိန်းသိမ်းရေး လိုအပ်နေပါတယ်” ဘာညာဆိုပြီး ဖြေသွားတာ ကြားလိုက်ရပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာမှ သေချာရေရာ မသိဘဲ ထင်ရာမြင်ရာ ဖြေထည့်လိုက်ပုံ ရတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံသား ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ဥပဒေ တိတိကျကျ ပြဌာန်းထားပြီးသားဆိုတာ အမေစုမသိလို့လား။ ဒီဘင်ဂါလီတွေကို နောက်ထပ် ဥပဒေထပ်ပြုပြီး အသိအမှတ်ပြုပေးရမယ်လို့ အမေစု ဆိုလိုချင်နေတာလား။
ဒီဘင်ဂါလီကိစ္စဟာ အမေစု ခင်ပွန်းအမျိုးတွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့တုန်းက ကျန်ခဲ့တဲ့ အမွေဆိုးတွေ ဆိုတာ အမေစု မသိလို့လား။ ဘာဖြစ်လို့ အခုမှ ဒီခေတ်က လူတွေကို ပုံချပြီး တာဝန်ယူခိုင်း နေရတာလဲ။ နောက်တစ်ခုက ILO မှာပြောခဲ့တာပါပဲ။ “စစ်တပ်အနေနဲ့ အာဏာ အလွန်အကျွံ ကျင့်သုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာ ထင်သာမြင်သာ မဖြစ်သေးကြောင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ဖြစ်စဉ်မှာ စစ်တပ်အနေနဲ့ ဟန့်တားတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး” လို့ ပြောခဲ့တယ်။ ဒီတော့ စစ်တပ်က ဘာတွေများ ဟန့်တားနေလဲလို့ မေးချင်တယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ ဦးဝင်းတင်တို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဆိုတာ မှတ်မိဦးမှာပေါ့။ အဲဒါကြီးကိုသာ တွန်းပြီး ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ ထင်သလဲ။ အမေစု ဥရောပ ရောက်တုန်း ဘော့စနီးယားဟာဇီဂိုဘီးနား၊ ခရိုအေးရှားတို့ ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သွားလေ့လာသင့်တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ပင်လုံညီလာခံမှာ ကချင် တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ တချို့ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ ကချင်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ တရား လက်လွတ် တောင်းဆိုမှုတွေ ကြောင့် မတက်ခဲ့ဘူးဆိုတာ အမေစု လေ့လာကြည့်ပါဦး။
နောက်တစ်ချက်က “ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ အားလုံးပါဝင်မှ ရေရှည်ခံမယ်လို့” အမေစု ပြောခဲ့ တယ်နော်။ ဒါဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ စနစ်တကျ အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့ စစ်တပ်ကို ဘာဖြစ်လို့ ချန်ထား ခဲ့ချင်ရတာလဲ။ ဦးနုတို့ရဲ့ ပါလီမန်ခေတ်ကလို တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်သတ်မှတ်တဲ့ ကိစ္စ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်း ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စ၊ အဲဒီဥပမာတွေကို ယူပြီး ဘင်ဂါလီတွေကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ဥပဒေပြု ပေးပြီးတော့ လုပ်ချင်ရာ လုပ်မလို့လား။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ တွေ့ကြုံလာရမဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံကို စစ်တပ် မပါဘဲ ထိန်းသိမ်းလို့ ဘယ်လိုမှ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ အပေါ်ယံလေး တွေးရင်တောင် ရနိုင်ပါတယ်။ အမေစု အခု ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်နေတယ် မဟုတ်လား။ စစ်တပ်ဟာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ဖွဲ့စည်းခဲ့တာ လို့ အမေစု ပြောခဲ့တဲ့ စကားရှိတယ်။ စစ်တပ် မပါဘဲနဲ့တော့ အမေစုရိုက်မဲ့ ဇာတ်ကားကြီးဟာ ဘာမှ ပီပီပြင်ပြင် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘဲ အခုခေတ် ပေါ်နေတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေလို ချစ်၊ကြိုက်၊ ကွဲ၊ ညား ဟီးဟီးဟီးဟားဟား ဇာတ်လမ်း ဖြစ်နေဦးမယ်နော် . . . .
Posted by ပြည်ထောင်စုသား at 8:20 PM
Anonymous 9:54 AM, June 22, 2012
မင်း မ နိုင် ( ၈ ၈ နွား ကျောင်း သား များ အ ဖွဲ့) 2:17 AM, June 23, 2012
ဒေါ် စု က အ ရှိန် မ ကုန် သေး လို့ ပါ။ တ သက် လုံး စစ် တပ် မ ကောင်း ဘူး ပြော လာ ခဲ့ တော့။ ခု ချက် ခြင်း ကြီး ကောင်း လိုက် ရင် ဗူး ဆို ဖ ရုံ ထပ် သီး နေ ရ မှာ ဆို လို့ နေ မှာ ပေါ့။ ဒေါ် စု ကို အား ကျ ပါ တယ်။ မြန် မာ နိုင် ငံ ကို ကျွန် ပြု ခဲ့ တဲ့ ကု လား ဖြူ ကို ယူ တာ နဲ့ ဖ လောင်း ဖ လဲ ပြော တတ် တဲ့ အ ကျင့် က လွဲ လို့ ပေါ့။
မြန်မာပြည်သားလေး 12:16 PM, June 28, 2012
အာရကန် 12:21 AM, August 07, 2012
ဖာသည်မ စောက်စုကြည် အောင်ဆန်ဆိုတဲ့နာမည်ထည့်ဖို့တောင် မတန်ဘူး စောက်ကုလာမ
Anonymous 10:34 PM, August 10, 2012
သေချာပါတယ် ရခိုင်ဆိုရင်မုန်းတယ်..ရခိုင်သားတွေကဘာလုပ်တာရှိလိုလည်း ရခိုင်ကိုလာတုံးက၀ိုင်းပြီးတော့ကြိုဆိုတာကိုမေ့နေပြီးလား...ရခိုင်တွေကတော့အားကိုးလိုက်ရတာ.အခုတော့....လာရင်သတ်မယ်
Anonymous 2:27 PM, August 11, 2012
ဒေအဘွားကီး အောင်ဆန်းစုကီဂို ငါရို့ရခိုင်သားတိ သေကေလေ့ မမေ့နိုင်စွာပါရာ... ဒင်းဂို သတ်ချင်ပါရေ... ဒင်းအတွက်နန့် ငါရို့ရခိုင်သားတိ ခွီးကလားတိစော်ကားတာ ခံရပါရေ... သူကမ္ဘာဂို သေသေချာချာပြောပီးရင် ဒေလိုမဖြိုက်နိုင်ပါရာ။
Anonymous 4:14 AM, October 11, 2012
သိပ်ပြောနေလည်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး ရခိုင်ပြည်နယ်ကို မျိုးမစစ်တွေထည့်သွားတာ ဦးနုအစိုးရဆိုတာတော့မှန်တယ် ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းရေးကိစ္စမှာတော့ ကုလား
အစိုးရနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ကုလားအစိုးရမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ့်သံအမတ်ဘယ်သူဆိုတာ သတိထားမိယင်တော့ဒီကိစ္စရဲ့အရင်းအမြစ်ဟာ တာဝန်မကင်း
တာသေချာနေတယ် ဒါကြောင်ဒီမိန်းမကြီးက ကုလားဖက်ကပါနေတာရှင်းတယ်။ပြည်သူကကုလားနှိပ်စက် တရုပ်ကတတ်ဖြစ်နေပေမယ့် သိန်းစိန်အစိုးရကတော့
flowerlover 1:38 PM, November 04, 2012
Anonymous 4:12 PM, November 13, 2012
ကုလားမယားကြီးက ...ဖာကျနေတာလေ..ေ၇ှ့စကား နောက်စကားမညီ ဘဲ သူပြောတာ ထောက်ခံတယ်ဆိုတိုင်း..ပညာတတ်ပီး ပညာမ၇ှိတဲ့မိန်းမကြီး...ခုလဲ ...သူများတွေက စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေချိန်..သူက အလည်ထွက်နေ..ခုထိ ဘာစောက်လုပ်မှ ပီပီပြင်ပြင်ကိုမလုပ်ပြနိုင်ဘး..အလုပ်မ၇ှိ အကိုင်မ၇ှိ အားအားယားယား နိုင်ငံခြားသွားသွားခံနေတယ်...
victornaing 2:18 PM, January 12, 2013
တစ်ခြား နိုင်ငံတွေ ရဲ့ သမတ တစ် ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း ကို ဘယ်လို သတ်မှတ်ထား လဲ
ဖွဲ့ စည်း ပုံ ကို လူ တစ်ယေါက် ဖြစ် ရန် ပြင် သင့် သလား။
Anonymous 12:50 PM, January 21, 2013
ကိုမေကိုလိုးတွေ ဘာတွေရေးနေလဲ မသိဘူး...ငါးလို့ မသားတွေ စောက်လုပ်စောက်ကိုင်မရှိ အမေစုချီးလောက်တောင် တန်ဖိုးမရှိတဲ့ လူတွေကများ ကွာ အမဲရိုးနှယ် ဟင်းအိုးမှာ့အာမနာပ ဝေဖန်လိုက်တာ...မင်းတို့ အမေတွေစောက်ပက်နဲ့ ပြန်ပွတ်ပြီး သန့် စင်လိုက်ပါအုံး...မိမဆုံးမ .စစ်သားသားသမီးတို့ ရေ..
Anonymous 10:29 PM, August 23, 2013
မအေလိုး စောက်စုလည်း စစ်သားသားသမီး...မင်းသာဖင်ခံ ဖို့ စောင့်နေတာနေမှာ..မင်ဖင်ကို ကွန်ဒုံးစွပ်ပြီးချရရင် သန်စင်မှာပါ...
ဆီမဆွတ်ဘူး နော်...အကြမ်းဆော်မှာ..ဒါမှ စစ်တပ်အကြောင်းသိမှာ
Anonymous 11:10 PM, January 23, 2013
နင့်မိထွေးကကောင်းလို့လား၊အရပ်သူတွေ နိုင်ငံခြားသားယူရင်ပြောကြတယ် ဘာမှဖူးစာမှဟုတ်ဘူး၊ရွတာမျိုးချစ်စိတ်မရှိတာ ခုမှပွဲလန့်တုံးဖျာလာခင်းတာ
သူများနဲ့တူလို့မ၇ဘူးလေ မိစုကဗိုယ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးလေ အဲ့ဒိကုလားကိုမယူ၇လို့သေမယ်ဆို၇င်တောင်သေလိုက် ဟိုတုံးက ကက်စက်ဇာတ်လမ်းထဲက
တဲ့ကျောင်းစားရိပ်နဲ့ပညာတတ်မကြီးရဲ့ နောက်လိုက်တွေကတော့ ဟင်းအားလုံးပေါင်းလိုက်ပထမတန်းရှေ့ကသူငယ်တန်းသာသာလောက်ပါအပြောအဆိုတွေသိပ်
နိမ့်တာပဲNLDရဲ့ပါတီဝင်တော်တော်များများက ပြောရမှာအားနာပါတယ် အစုတ်ပလုတ်တွေ ၁၀၉/၁၁၀တွေ ၉၀%များတယ်၊ဒါကြောင့်အားအား ယားယားအမြဲလုပ်နိုင်တာပေါ့
Anonymous 3:53 PM, March 23, 2013
ကျန်စစ်သားကသာ ရွှေအိမ်စည်ကို ပဋက္ခယားနဲ့ ပေးစားခဲ့ရင် ဒီအချိန် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ အေးချမ်းတဲ့ ဘယ်လိုအလင်းရောင်မျိုးကိုမှ
သူများတွေတည်ထောင်ထားခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်မှာ အခန့်သားပေါက်ဖွားလားပြီး ဘာမှလဲမလုပ်ပေးရသေးဘဲနဲ့ သူကိုယ်တိုင်ကိုးကွယ်နေတဲ့
အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ဘာသာဝင်တွေကို အပြစ်တင်တာကတော့ ..............
Anonymous 2:36 PM, June 18, 2013
ke ..thit kya daeataing ber bay,,,
NO DAW SU,NO PROBLEM
NO NLD. NO PROBLEM
NO WIN HTAIN,NO PROBLEM
NO NYAN WIN ,NO PROBLEM
NO 88 DOGS NO PROBLEM
NO KALARS NO PROBLEM
WE LOVE OUR RELIGION,OUR NATIONALITIES,TRADITIONAL.CULTURE SO MUCH,,
Anonymous 7:29 PM, June 25, 2013
Fucking To Daw Su
Anonymous 7:30 PM, August 01, 2013
ကြိုက်တယ်ကွာ၊ ဆက်ပြီး ရေးပါဦး
Anonymous 10:04 PM, August 30, 2013
ဒေးဗစ်လှမြင့်နဲ့ငြားခဲ့တာအားလုံးသိတယ်။ ဘဘဦးကြည်မောင်ကပြောတယ်၊ နှာဘူးမတဲ့။
kyaw lay 3:29 PM, October 10, 2015
နိုင်ငံရေး နှင့် သာသနာေ၇း (2)
ONLINE CASINO, globe counter, 888, CASINO ONLINE, online dating sites